मानव जातिको इतिहासमा कार्ल मार्क्सको निकै ठूलो योगदान छः अध्यक्ष प्रचण्ड (सम्बोधनको पूर्ण पाठ)
(कार्ल मार्क्सको २०१ औं जन्म जयन्तीका अवसरमा मिति २०७६ बैशाख २२ गते काठमाडौंमा आयोजित विचार गोष्ठीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष प्रचण्डले गर्नुभएको सम्बोधनको सम्पादित अंश - सम्पादक )
मैले अस्ति घनश्यामजीलाई भनेको थिएँ, आजको कार्यक्रम धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई पनि बोलाउनु होला । त्यस कार्यक्रममा कार्ल मार्क्सका योगदान, मार्क्सवादका शिक्षा र नेपाली समाजमा यसको प्रयोगबारे गम्भिर बहस हुन जरुरी छ । तर, कमरेडहरुले प्रधानमन्त्री र माधव कमरेड आउन नसकेको जानकारी दिनुभयो । यहाँ सचिवालयका २ जना स्थायी समितिका धेरै र केन्द्रीय समितिका अधिकांश नेता हुनुहुन्छ ।
मानव जातिको इतिहासमा कार्ल मार्क्सको निकै ठूलो योगदान रहेको छ। मानव जातिले कार्ल मार्क्सलाई १००० वर्ष यताकै महान व्यक्ति, महान् दार्शनिक ठान्छ, जसका विचारले संसारलाई नै प्रभावित गर्यो। आजसम्म त्यसको वैज्ञानिक खण्डन कसैले गर्न सकेको छैन। सर्वहारा वर्गले मात्र होइन, उहाँलाई पुँजीवादी शिविर र दुनियाँले मानेको छ।
मार्क्सका सिद्धान्त सार्वभौम छन्। वैज्ञानिक समाजवाद, वर्गसङ्घर्ष, अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त, उत्पादन सम्बन्ध सम्बन्धी मार्क्सको खोज र व्याख्यालाई कसैले वैज्ञानिक रुपले खण्डन गर्न सकेको छैन । तर, २०० वर्षको अवधिमा सर्वहारा वर्गले धेरै ठूला उतार-चढाव बेहाेर्यो । यसका बारेमा तपाईंहरुलाई धेरैथोरै जानकारी छ । विश्व सर्वहारा वर्गले धेरै ठूला घुम्ती र मोडहरु छिचोलेर यहाँसम्म आइपुगेको छ।
झापा विद्रोह वा केन्द्रीय न्युक्लियस हुँदा पनि हामी संकल्पबद्ध थियौं। त्यो बेला हामीमा निकै ठूलो उर्जा थियो। थोरै युवाहरुले पञ्चायती कालरात्रि उल्टाउन लागेका थियौं। वर्गसङ्घर्ष गर्ने हो, हतियार उठाउने हो भन्ने आत्मविश्वास थियो। त्यसमा ठूलो संकल्प थियो। हामी निकै ठूलो विचित्र सपना देख्थ्यौं। घरको सबै बेचेर, गोरु-भैंसी बेचेर पार्टीलाई बुझाइन्थ्यो। रातभरि मिटिङ गर्थ्यौं। हामी हप्तौं सुत्दैनथ्यौं। रातभरि संगठन र संघर्षको काम गर्थ्यौं। त्यसमा छुट्टै उर्जा र गौरव थियो ।
हामी थोरै पूर्णकालीन कार्यकर्ता थियौं । हामी दलित बस्तीमा जाँदा गौरवको अनुभूति हुन्थ्यो । अन्तरजातीय विवाह गराउँदा गौरव हुन्थ्यो । झुपडीमा जाँदा बेग्लै आनन्द आउँथ्यो। असीम त्यागको अनुभूति हुन्थ्यो । अहिले हामी लाखौं कार्यकर्ता छौं । ठूलो शक्ति पनि छौं । तर, हिजोको निष्ठा कता छ, हामी कता छौं ? अहिले सोच्दा विचित्र लाग्छ । हिजो थोरै हुँदा दुनियाँ बदल्छौं भन्ने मनोबल अहिले कता पुग्यो ? यति ठूलो पार्टी हुँदा पनि हामी किन एक्लो महशुस गर्दैछौं ?
हिजो पश्चिमको साथी पूर्व जाँदा हार्दिकता हुन्थ्यो। कसिलो हात मिलाइन्थ्यो। हृदयदेखि भावना जागृत हुन्थ्यो। आफ्नोपनको अनुभूति हुन्थ्यो। हामीले जतिसुकै ठूला दुखकष्ट र चुनौति बिर्सन्थ्यौं। तर, अहिले किन त्यस्तो हुँदैन ? हिजो जङ्गलमा सुतियो। तर, जङ्गलको अनुभूति भएन। हामी जङ्गलमा भएजस्तो अनुभूति पनि भएन। तर, अहिले काठमाडौंमा लाखौंको बिचमा हुँदा एक्लै भएको महशुस हुन थालेको छ। अहिले के विचित्र भइराखेको छ ?
हामी ६/७ लाख कार्यकर्ता उठ्ने हो भने त हामीले दलाल नोकरशाही पुँजीवाद परास्त गर्न सक्छौं । तर, हामी हिम्मत हार्दैछौं । किन एक्ला भएका छौं ? हामी समूहमा भएर पनि किन कमजोर हुँदैछौं ? हामीले संकल्प र समीक्षा गर्ने यही हो । हामीले मार्क्सबाट सिक्ने यहीँनेर हो । कार्ल मार्क्सले जिन्दगीभर सङ्घर्ष गर्नुभयो। त्यहाँ गाडी थिएन, घर थिएन । जिन्दगीभर दुःखकष्टको जिन्दगी बिताउनुभयो । हामीसँग अहिले घर छ, गाडी छ । तर, कता हरायौं, हाम्रो उर्जा र संकल्प कहाँ गयो ? हाम्रो गल्ती यहीँनेर छ। समीक्षा यहीँ गर्नुपर्छ।
मेरो आलोचना होस्, म सधैं तयार छु। म आलोचनालाई स्वागत गर्छु। तर, यथार्थमा उभिएको हुनुपर्छ। भ्रामक होइन, यथार्थ आलोचना होस्। म सधैं श्रमजीवी वर्गको पार्टी बनाउन संकल्पबद्ध छु, त्यसका लागि आलोचना सुन्न र सच्चिन तयार छु।
महान बहसबाट मात्र सही विचार आउँछ। सही विचार वर्गसङ्घर्ष, उत्पादन सङ्घर्ष र वैज्ञानिक प्रयोगबाट आउँछ। सही विचार विद्वानले मात्र ल्याउने होइन। मार्क्सले नगरेको भए सर्वहारा विचारको विकास अरु कसैले गर्थ्यो। त्यो कुरा मार्क्सले नै भन्नुभएको छ। वस्तुगत परिस्थितिले त्यो अवस्था आयो, मार्क्सवादको विकास भयो।
तर, मार्क्सजस्तो विलक्षण प्रतिभाको विद्धान र दार्शनिक नभएको भए मार्क्सवाद जन्मन अझै धेरै समय लाग्न सक्थ्यो । हाम्रो सन्दर्भमा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ। हामी २१ औं शताब्दीमा छौं । यो पार्टीले २१ शताब्दीको विचार र संगठनात्मक सिद्धान्त दिन सक्नुपर्छ । हामीले यो कार्यभार पूरा गर्नैपर्छ, हामीले पार्टीमाथि, जनतामाथि भरोसा गर्नैपर्छ।
मार्क्सवाद कुनै जमेको पोखरीको पानीजस्तो होइन। मार्क्सवादले वैज्ञानिक प्रयोग मान्छ। खुरुखुरु सुत्रले यो हुँदैन, बहस र प्रयोगमा जानुपर्छ। मार्क्सले आफ्नै जीवनमा त्यो प्रयोग गर्नुभएको छ। कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रिय बनाउने र भत्काउने, पार्टी बनाउने र विघटन गर्ने प्रयोग उहाँले नै गर्नुभयो । तर, हामीकहाँ नयाँ प्रयोग गर्दा अस्थिरको आरोप लाग्छ । हामीले समयअनुसार कदम चाल्नुपर्छ। परिस्थितिअनुसार कदम चाल्ने नेता अस्थिर होइन, गतिशील हो । हामीले पोखरीको पानी भत्काउनुपर्छ । मलाई त्यो पोखरी भत्काएर गड्गडाउने खोलो बनाउन मन लाग्छ।
मैले विश्वका कम्युनिष्ट आन्दोलन जति पढें, क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका अनुभव जति पढें, बुझें, त्यहाँबाट सिकेको त्यही हो । म सानो समूहको महासचिव थिए। मैले त्यही पार्टी भत्काएँ। मलाई मेरै पार्टी भत्काउन मन लाग्यो । सानो नाङ्लो पसल थापेर हुँदैन भन्ने लाग्यो । मैले पार्टी भत्काउन थालें । नयाँ पार्टी बनाउने कोशिस गरें । मैले नै ध्रुवीकरणको प्रक्रिया सुरु गरेको थिएँ ।
हामीले ध्रुवीकरणको सोंच त्यतिमै सीमित राखेका थिएनौं । म र मदन भण्डारीबीच पार्टी एकताबारे कुरा गर्ने सल्लाह भयो । तर, त्यो दिन आएन। बीचमै मदन भण्डारीको अवसान भयो । तर, पर्खिदै गएर हामी यहाँ आयौं। अहिले २ शक्तिशाली पार्टीबीच एकता भएको छ। मदन भण्डारीको अवसानपछि हामी २ वटा प्रयोगमा गयौं। शान्तिपूर्ण राजनीतिलाई जनतासँग जोड्ने मदन भण्डारीको प्रयोग थियो । अर्को प्रयोग मेरो नेतृत्वमा, नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा जनयुद्ध भयो।
केही वर्ष त एकले अर्कालाई निषेध गर्न नखोजेको होइन । केही वर्ष शत्रुतापूर्ण सङ्घर्ष पनि भयो । तर, यो वैज्ञानिक सावित भएन । परिस्थितिले दुवै कम्युनिस्ट पार्टी मिल्नु नै राम्रो बनायो। जनताले पनि हामीलाई मिल्न आदेश दिए । हाम्रो बिचमा धेरै अन्तरक्रिया र बहसहरु भए । जनयुद्धकै बेला पनि हाम्रो बीचमा ठूलो बहस सुरु भएको थियो। हामीमा नयाँ परिस्थिति पैदा भयो। हामीले एकताका लागि गहन छलफल र बहस गर्यौ ।
पार्टी एकता ठूलो काम हो, ऐतिहासिक काम हो, असाधारण काम हो। २ अलग बाटोमा हिडेका पार्टी एक ठाउँमा ल्याउनु सामान्य कुरा होइन। मार्क्सवादका शिक्षालाई ठीक ढंगले नबुझी यो सम्भव थिएन। हामीले यो ठूलो प्रयोग गर्‍यौँ । हामी त्यसमा सफल भयौं।
अब युद्ध स्तरमा अधिवेशन हुन्छ। त्यो बहसमा जानु पनि हो। हामीमा धेरै कन्फ्युजन छैन। विचारमा अहिले एउटा कुरा नै मुख्य हो। हामी समाजवादी कित्तामा कि पुँजीवादमा ? हाम्रो बहस यहीँनेर हो। अरु धेरै कुरा छैन। अहिले नै समाजवादको आधार बनेको छैन। पुँजीको विकासविना अहिल्यै समाजवाद बन्दैन। त्यसका लागि हामीले सङ्घर्ष गर्नुछ। हामीले उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नेतिर जानुपर्छ। हामीले विकास र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसले मात्रै समाजवादको जग बसाल्न सकिन्छ।
पुँजीको विकास हुँदैमा समाजवाद आउँदैन। दलाल नोकशाही पुँजीवाद प्रतिस्थापन नगरी समाजवाद आउँदैन। चीनले हामी अझै समाजवादको प्रारम्भमा छौं भनिरहेको छ। समाजवादका लागि सचेत धक्का चाहिन्छ। हामीले त्यसकै लागि काम गर्नुपर्छ। हामीमा विचार र संगठनमा गति चाहिन्छ, विकास चाहिन्छ, राष्ट्रिय पुँजीको विकास चाहिन्छ। पार्टीमा कमरेडली व्यवहार चाहिन्छ। त्यता लैजानुछ। हामीले कमरेड बनाउँछौं। कम्युनिस्ट पार्टीमा बदमास थोरै हुन्छन्। तर, हामीमा समस्या छ। त्यसको समाधान खोज्नुपर्छ।
अब हामीले महान् बहस सुरु गर्नुपर्छ। सम्पूर्ण करेडहरु यो बहसमा जानुपर्छ। हामीले महान विचार निर्माण गर्नुछ, समाजवादी संस्कृति निर्माण गर्नुछ। हामी दुनियाँमा सबैभन्दा आक्रामक छौं। नयाँ विचार, नयाँ कार्यदिशा दिने हामीले नै हो। अहिले नै अरुबाट आशा गरेर हुँदैन। हामीले गर्न सकेनौं भने दुनियाँमा ५० वर्ष अर्को क्रान्ति हुँदैन। विश्वलाई नयाँ विचार र कार्यदिशा दिने रणनीतिक उद्देश्यसहित पार्टी एकता गरिएको हो। सरकार कब्जा गर्न र प्रधानमन्त्री हुन एकता गरिएको होइन।
हामीले संसारभरिका श्रमजीवीलाई नयाँ सन्देश दिन एकता गरिएको हो। पार्टी एकता महान चीज हो। तर, यो आरामसाथ अघि बढ्दैन। पार्टी एकता महान विवाद, महान सङ्घर्षको सुरुवात पनि हो। यो सजिलो कुरा पनि होइन। हामीले नयाँ सङ्कल्प गर्नैपर्छ। त्यसका लागि तयार हुन म सबै कमरेडहरुलाई अपिल गर्न चाहन्छु। म फेरि एकपटक सम्पूर्ण त्याग गरेर सङ्घर्षमा होमिन तयार छु। मलाई कुनै कठिनाई छैन। तर, म एक्लै हिँडेर मात्र पनि हुँदैन। त्यसका लागि तपाईंहरुको साथ चाहिन्छ।
Previous - प्रचण्ड दम्पत्ति विवाहको ५०औं वर्षगाँठ, चियापान समारोह गरेर मनाइने
Next - मानव जातिको इतिहासमा कार्ल मार्क्सको निकै ठूलो योगदान रहेको छ – अध्यक्ष प्रचण्ड (भिडियो)